Garsoore Dhowaan Loo Diiwaan-geliyey Rikoodh Dhif & Naadir Ah Oo Loo Doortay Kulanka PSG vs Bayern Munich - Laacib
HomeWararka Champions LeagueGarsoore Dhowaan Loo Diiwaan-geliyey Rikoodh Dhif & Naadir Ah Oo Loo Doortay Kulanka PSG vs Bayern Munich
Garsoore Dhowaan Loo Diiwaan-geliyey Rikoodh Dhif & Naadir Ah Oo Loo Doortay Kulanka PSG vs Bayern Munich
Lugta labaad ee wareegga siddeedda tartanka Champions League ee u dhaxaysa Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain ee ka dhacaysa garoonka Parc des Princes ee waddanka Faransiiska ayaa loo doortay in uu dhex-dhexaadiyo garsooraha caanka ah ee Daniele Orsato.
UEFA ayaa shaaciyey in garosoraha Talyaanigu uu xaakim ka noqon doono ciyaarta xiisaha leh ee Salaasada ay foodda isku darayaan PSG oo garoonkeeda joogta iyo Bayern Munich oo lugtii hore lagaga soo badiyey hoygeeda.
Ciyaartii hore ee labadan kooxood ayaa kusoo dhamaatay 3-2 ay guushu ku raacday PSG, iyadoo laba ka mid ah goolashaasna uu dhaliyey Kylian Mbappe.
Garsooraha ciyaartan ee Daniele Orsato oo lagu tilmaamo kuwa ugu fiican dunida, haddii aanu kaalinta koowaadba ku jirin, ayaa u dhaxayn doona labada kooxood oo ku dagaallami doona midkoodii iska xaadirin lahaa wareegga siddeedda.
Isla markii uu soo baxay go’aanka UEFA ay Daniele Orsato ugu dooratay xaakimka ciyaartan, Bayern Munich ayaa soo bandhigtay natiijooyinka ay kusoo dhamaadeen ciyaarihii hore ee uu soo qabtay, kuwaas oo tiradoodu tahay afar ay saddex ka mid ah guulo keeneen.
45 jirkan ayaa ahaa garsoorihii hayey ciyaartii finalka Champions League ee xilli ciyaareedkii hore ee Bayern Munich ay 1-0 koobka kaga qaadday PSG, taas oo go’aamadiisa qaarkood ay dood ka keeneen ciyaartoyda labada kooxoodba.
Orsato ayaa sidoo kale hayey ciyaartii Liverpool ay 3-1 ku garaacday Bayern Munich ee ay kaga reebtay tartankan, ka hor intii aanay koobka qaadin.
Sidoo kale, ciyaartii ay Bayern Munich 5-1 ku burburisay Benfica sannadkii 2018 ayuu hayey. Waxa kale oo uu isla sannadkaas ahaa xaakimkii hayey ciyaartii ay Bayern 2-1 kaga adkaatay Sevilla.
Garsoorahan ayaa khilaaf abuuray bishii hore ciyaartii Atletico Madrid iyo Chelsea ee wareeggii 16ka oo uu kooxda reer Spain ka diiday rikoodhe.
Waxa kale oo lagu eedeeyey in uu rikoodhe ka diiday Bayern Munich iyo PSG finalkii Champions League ee xilli ciyaareedkii hore.
Taariikhda uu dhigay garsoore Daniele Orsato
Garsoorahan ayaa xilli ciyaareedkan lagu qoray buugga taariikhda kubadda cagta, kaddib markii loo ogolaaday in uu telefishanka soo hor-fadhiisto oo uu sharraxo sida uu go’aamada u qaatay ciyaar ka tirsanayd horyaalka Talyaaniga ee Serie A.
Hore ugama dhicin kubadda cagta in garsooreyaashu bixiyaan waraysiyo, waxaanay ahayd mamnuuc, balse xidhiidhka kubadda cagta Talyaaniga ayaa Daniele Orsato dhowaan u fasaxay in uu yimaaddo warbaahinta horteeda oo la weydiiyo su’aalo la xidhiidha qaabka uu go’aamada u qaato, iyadoo si gaar ahna loo weydiiyey dhacdooyin kulamada qaarkood uu sameeyey.